Jaaliyadda Soomaaliyeed ee Suudaan oo la afurtay muslimiinta kale ee Suudan ku nool. | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Jaaliyadda Soomaaliyeed ee Suudaan oo la afurtay muslimiinta kale ee Suudan ku...
Jaaliyadda Soomaaliyeed ee Suudaan oo la afurtay muslimiinta kale ee Suudan ku nool.
Suudaan(SNTV) Afur wadareedkan ay soo qaban qaabiyeen Golaha Saaxiibtinimad Shacuubta islamarkaana ay ka qayb galayeen Jaaliyadaha ku nool Suudaan oo ay qeyb ka ahayd Jaaliyadda Soomaaliyeed ayaa ka dhacay Caasimadda Khartoum ee Dalka Suudaan.
ayaa sidoo akle Afur wadareedkan waxaa goob joog ka ahaa Lataliyaha Madaxweynaha Suudaan, Wasiiro, Safiiraada Caalamka u fadhiya Suudaan Madaxda Jaaliyadaha ku nool Suudaan, Culamo u diin iyo marti sharaf kale.
Afur wadareedkani oo sanad walba la qabta ayaa waxaa sanadkan ka qeyb qaatay in ka badan 51 Jaaliyadood,iyadoona Jaaliyad walba ay goobta ku soo bandhigeysay Cunooyinka u gaarka ah,Jaaliyadda Soomaaliyeed ayaa halkaasi ku Soo Bandhigeen Cunooyinka Soomaalida lagu qayaano sida Baastada, Biriiska, Hilibka, Canjeerada iyo Sanbuuska.
Guddoomiyaha Jaaliyadda Soomaaliyeed ee Dalka Suudaan Cabdi Wali Xasan Xuseen “Fadilatahu” ayaa sheegay in Soomaalida ku dhaqan Suudan ay aad ugu qeyb qaateen Afur wadareedkani.
Bandhiga cunooyinka ee Jaaliyadaha oo laqabto bisha Barakeysan ee Ramadaan ayaa ka duwan kii sanadkii hore,iyadoona Jaaliyadda Soomaaliyeed ee Dalka Sudaan ay Sanadkaani si weyn ugu qayb qaadatay Afur wadareedka.
Previous articleGuddoomiye Yariisow”Waxaa naga go’an in aan garab istaagno dadka ay roobabku saameeyeen”
Next articleFaa’iidooyinka Bisha Ramadaan